Frozen Bubble 2, yakanyanya Kisimusi yakavhurika sosi dambanemazwi | Linux Vakapindwa muropa
Frozen Bubble 2, yakanyanya Kisimusi yakavhurika sosi dambanemazwi
Nezuro manheru, pakudya kwemanheru emusi weKisimusi, zvakakurudzirwa kuti tisangane nevanhu vashoma, chimwe chinhu chinowedzera kune mamwe mazororo ekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Asi izvo hazvina kutitadzisa kuenderera mberi nekubatana nemhuri, kungave kuburikidza neWhatsApp, kufona kana, sekune kwangu, vhidhiyo yekufona. Imwe hama neni tanga tichitaura pamusoro pekuchinja kwemitambo yemavhidhiyo kubva patakaenda kunzvimbo dzepamusoro, uye akandiudza «Ainzi ani uya wekutyora mabhora aive akanamira padenga?«, Kwandisina kuziva kuti ndopindura sei, asi mushure mekuitsvaga, tinorangarira kuti yaive Puzzle Bobble, iyo pane yakavhurwa sosi vhezheni inonzi Frozen bubble 2.
Kana ndakafunga nezvekutsikisa chinyorwa ichi pano uye nhasi chave chiri nekuda kwezvikonzero zviviri: rekutanga rave zita, "chando chando" chisingarambwe kuva nezita reKisimusi. Chikonzero chechipiri ndechekuti yaingova isiri paLinuxAdictos, izvo zvinoshamisa nekuti zvave zviripo kwenguva yakareba. Semazuva ese, iyo vhura sosi vhezheni yePuzzle Bobble yakagadzirirwa zvakanyanya kune yeruzhinji Linux yashandura protagonist yeiyo penguin, a Tuxedo mabhora crusher.
Frozen Bubble 2 inosanganisira Tux semunhu ari protagonist
Kana zviri zvemutambo pachawo, rine peji repamutemo rinowanikwa pa Iyi link, tinogona kutaura zvishoma izvo zvisingaonekwe muvhidhiyo yapfuura. Chatinofanira kuita kupfura mabhora, uye patinobatana 3, avo vatatu vanowa uye vese avo vakarembera wavo. Izvo zvisizvo zvekudzora ndezvechokwadi kufambisa pfuti kurudyi, kuruboshwe kuenda neimwe nzira, uye museve wekumusoro kupfura; pamwe neF isu tinopinda yakazara skrini. Zvakareruka sekudaro. Uye saka muropa. Frozen Bubble 2 zvakare inotibvumidza kutamba tichipesana nemumwe, inozova makwikwi kwete chete ekuona kuti ndiani anoenda zvakanyanya, asi kuona kuti ndiani anosvika ikoko kutanga. Chaizvoizvo idombo remutambo wekutanga, asi yakavhurwa sosi.
Kuisirwa kwaro muLinux kunoenderana nekutengeswa kwedu, kunyangwe kazhinji kuri mumahofisi epamutemo, sezvakatsanangurwa mu kurodha peji kubva Frozen Bubble 2. Pane nzira yakajairika yekuisa, iyo iri kubva Flathub, imwe yesarudzo dzakanakisa kwandiri. Chero chaunosarudza, kunakidzwa kunovimbiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » Frozen Bubble 2, yakanyanya Kisimusi yakavhurika sosi dambanemazwi